1. Mgbaji aka ekpe ugboro abụọ, mpịachi aka nri otu ugboro na ogologo ogologo ugboro abụọ.
2. Mgbe mpịachi, enwere ike ịme akpa akwụkwọ ntuziaka n'otu ibe, ma ọ bụ akpa akwụkwọ ntuziaka nwere ike rụọ n'ọtụtụ iberibe.
3. Akụrụngwa nwere ike tinye nha akwa ahụ ozugbo agbatịchara, na sistemụ nwere ike gbanwee amamihe na ogologo ya.
Aha aha: UBL
Asambodo: OA. SGS, ISO9001: 2015
Nọmba nlereanya: UBL-T-400
Obere ikike ịtụ: 1
Mmeghe ọrụ: A na -eji ya n'ọtụtụ waya, ogwe osisi, ọkpọ plastik, jelii, lollipop, ngaji, efere enwere ike ịwepụ, na ihe ndị ọzọ. Ọ nwere ike ịbụ akara oghere ụgbọelu.
Igwe akpaaka akpaaka akụkụ abụọ
UBL-T-500 dabara na otu akụkụ na akara okpukpu abụọ nke karama dị larịị, karama gbara gburugburu na karama square, dị ka karama dị larịị, karama mmanụ na-ete mmanụ, karama nke ihe nchacha aka, wdg. , nke a na -ejikarị eme ihe ntecha, ihe ntecha, petrochemical, ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Ịkwado igwe akpaaka okirikiri
UBL-T-401 Enwere ike itinye ya na akara nke ihe okirikiri dị ka ihe ntecha, nri, ọgwụ, mmetọ mmiri na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Desktop akpaka karama igwe
UBL-T-208 igwe akara igwe maka igwe anaghị agba nchara dị elu na alloy aluminom dị elu, isi akara site na iji moto servo dị elu iji hụ na izizi na ọsọ nke akara;
UBL-T902 na onye na-edebanye aha akara, Enwere ike jikọta ya na ahịrị mmepụta, mmụba nke ngwaahịa, n'ụgbọ elu, akara gbagọrọ agbagọ, na-etinye akara ntanetị, ghọta na-akwado ịkwalite eriri na-ebugharị koodu, na-asọba site na akara ihe.
Igwe na -edenye aha mbadamba
UBL-T-300 mmeghe ọrụ: Kwesịrị ekwesị maka ịkpọpụta ngwaahịa akpaghị aka. , akpa rọba, Mbadamba ụrọ mbadamba wdg.
Ọ dabara na ụdị ngwaahịa kaadị ọ bụla, na -enweta njikọta nke nkewa kaadị, akara akpaka, na nchịkọta kaadị akpaka.
Site n'iji teknụzụ na -ekewa kaadị na -agbanwe agbanwe, ọ ga -ekewa kaadị ndị ahụ nke ọma na -enweghị ọkọ n'elu ya.
Dị ka: kaadị ịchapu, akpa PE, igbe dị larịị, akpa akwụkwọ, akpa uwe, ibe agba agba mgbasa ozi, mkpuchi akwụkwọ akụkọ na ihe ndị ọzọ.
Akpụkpọ akpaghị aka unscrambler
Kwesịrị ekwesị maka karama gbara gburugburu, nnyefe akpaka karama square, dị ka ejikọrọ na igwe edetu, igwe na -ejuputa igwe, eriri na -ebugharị igwe, nri karama akpaka, melite arụmọrụ; Enwere ike itinye ya na nkwonkwo etiti nke ahịrị mgbakọ dị ka ebe nchekwa ihe iji belata ogologo eriri ebu.
Onye na -enyocha karama, Onye na -enyocha karama mmanya, Igwe nyocha akara, Onye na -enyocha karama biya, Ngwa mbukota akwa, Onye na -enyocha karama,